Ogaden News Agency (ONA) – Sir fakatay iyo Qorshe cadow oo Fashilmay
Sir fakatay iyo Qorshe cadow oo Fashilmay
Saraakiisha gumaysiga Itoobiya ee fadhigoodu yahay Harar iyo gacanyaraha gumaysiga Cabdi Ileey ayaa waday sadexdii bilood ee u dambaysay qorshe ay si qasab ah ugu xareynayeen qaar kamid ah maxaabiista jeel Ogaadeen oo u badan dhaliyaro laga soo qabqabtay gobolada Ogadenya iyo ashkhaas kamid ah N/hurayaashii galay gacanta gumaysiga(Halkan ka eeg dhaliyarada sida qasabka ah lagu xareyey).
Ujeedada laga lahaa ciidamaynta dhaliyaradas ayaa ahayd in maleeshiyaadkan cusub iyo wixii dambaba xeryo looga sameeyo badhtamaha kolba meesha la rabo in lagu halaago,qorshahan ayaa yimid kadib markuu batay baxsigii liyuu booliska ayna ku madheen gacanta N/hurayaasha intii soo hadhayna laga kari waayey magaalooyinka waaweyn.
Usbuucii tagay ayay ahayd markay 19 Liyuu boolis ahi ka baxsadeen magaalada Fiiq dhowr kalana la qabqabtay iyagoo direyskoodii qaba si aysan u baxsanin (Sawirkoda hoos ka eeg). ,arintan ayaa timid kadib markii amar lagu siiyey inay ku baxaan ciidan ONLF ah oo soo dul dagay magaalada.
Xalay mar aan khadka qoraalka kula xidhiidhay Taliye Gadhyare ayuu ii sheegay maleeshiyaadkii la xareeyey qaar badan oo kamid ahi inay baxsadeen 59 kamid ahna dib loogu taxaabay xabsiga Jeel Ogaadeen(dhugo Qoraalkaan is dhaafsanay).
Sirtan fakatay ayaa fashilisay qorshahaas gumaysiga,waxayna ciidamada ONLF si daqiiq ah ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada gumaysiga iyo gacan yarayashooda.
Noora Afgaab- Jigjiga